ခင်ပွန်းလောင်းရဲ့ သူမအပေါ်အလေးထားပုံတွေကို ကြည်နူးပီတိမျက်ရည်တွေနဲ့ ပရိတ်သက်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ ဆုမွန်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Cele Snap
ခင်ပွန်းလောင်းရဲ့ သူမအပေါ်အလေးထားပုံတွေကို ကြည်နူးပီတိမျက်ရည်တွေနဲ့ ပရိတ်သက်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ ဆုမွန်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
November 6, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေဆုမွန် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်တဲ့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေထဲကတစ်ဦးပါ။ မင်းသမီးတွေနီးနီးကို ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းခံရသူတစ်ယောက်လို့ဆိုရမှာပါ။ အစီအစဉ်တော်တော်များမှာပါဝင် တင်ဆက်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာလေးတွေအမြဲပြုလုပ်တတ်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ”ဂျီဟောသူ”ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကာ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကို သိမ်းကြုံးယူနိုင်ခဲ့သူလေးပါ။ သူမရဲ့အချစ်ရေးကတော့ လတ်တလောမှာ ပရိသတ်တွေကိုSurprise​ ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဆုမွန်ရဲ့ စေ့စပ်မင်္ဂလာသတင်းအတွက် ဂုဏ်ပြု စကားလေးတွေပြောကြားခဲ့ပါဦးနော်။ မကြာခင်ရက်ပိုင်းတုန်းကတော့ ဆုမွန်က ချစ်သူနဲ့ ဗီဒီယိုေ ကာ နဲ့ခေါ်ပြီးစေ့စပ်လမ်းကြောင်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဆုမွန်က ချစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေကို ပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. နှစ်ဖက်မိဘအသိုင်းအဝိုင်းကစပြီး အရမ်းကိုအဆင်ပြေစေတာမို့ စိတ်ချမ်းသာရတဲ့အကြောင်းနဲ့ ချစ်သူက အသေးစိတ်ကစပြီးအရမ်းကိုရိုတတ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း ချစ်စရာကောင်းအောင် ပြောပြလာခဲ့ပါ တယ်နော်. ဒါ့အပြင် နောက်ထပ်တစ်နှစ်လောက်မှာ လက်ထပ်တော့မယ်လို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်း ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်..ဒါ့အပြင် ဟန်းနီးမွန်းကိုတော့ချစ်သူမရှိတဲ့အတွက် ချစ်သူရဲ့မိသားစုနဲ့ခရီးထွက်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြာလာ ခဲ့ပါတ ယ်နော်…
Source – SuMon, Sunday
ပရိသတျကွီးရဆေုမှနျ ကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အောငျမွငျတဲ့ အစီအစဉျတငျဆကျသူတှေထဲကတဈဦးပါ။ မငျးသမီးတှနေီးနီးကို ယောကျြားလေးပရိသတျတှရေဲ့ ဝနျးရံခွငျးခံရသူတဈယောကျလို့ဆိုရမှာပါ။ အစီအစဉျတျောတျောမြားမှာပါဝငျတငျဆကျပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့အမူအရာလေးတှအေမွဲပွုလုပျတတျသူလေးလညျးဖွဈပါ တယျ။
ဒါ့အပွငျ ”ဂြီဟောသူ”ဇာတျလမျးတှဲမှာလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ကာ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြကို သိမျးကွုံးယူနိုငျခဲ့သူလေးပါ။ သူမရဲ့အခဈြရေးကတော့ လတျတလောမှာ ပရိသတျတှကေိုSurprise​ ဖွဈစခေဲ့တာပါ။ ပရိသတျကွီးလညျး ဆုမှနျရဲ့ စစေ့ပျမင်ျဂလာသတငျးအတှကျ ဂုဏျပွု စကားလေးတှပွေောကွားခဲ့ပါဦးနျော။ မကွာခငျရကျပိုငျးတုနျးကတော့ ဆုမှနျက ခဈြသူနဲ့ ဗီဒီယိုကော နဲ့ချေါပွီးစစေ့ပျလမျးကွောငျးတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားခဲ့တာ ဖွဈပါတ ယျနျော..
ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ဆုမှနျက ခဈြသူရဲ့ ဂရုစိုကျမှုတှကေို ပွောပွလာတာ ဖွဈပါတယျနျော.. နှဈဖကျမိဘအသိုငျးအဝိုငျးကစပွီး အရမျးကိုအဆငျပွစေတောမို့ စိတျခမျြးသာရတဲ့အကွောငျးနဲ့ ခဈြသူက အသေးစိတျကစပွီးအရမျးကိုရိုတတျတဲ့အကွောငျးကိုလညျး ခဈြစရာကောငျးအောငျ ပွောပွလာခဲ့ပါ တယျနျော. ဒါ့အပွငျ နောကျထပျတဈနှဈလောကျမှာ လကျထပျတော့မယျလို့ စီစဉျထားတယျလို့လညျး ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ..ဒါ့အပွငျ ဟနျးနီးမှနျးကိုတော့ခဈြသူမရှိတဲ့အတှကျ ခဈြသူရဲ့မိသားစု နဲ့ခရီးထှကျ ဖို့စီစဉျနတေဲ့အကွောငျးကိုလညျး ပွောပွာလာ ခဲ့ပါတယျနျော…
စကစကဖိတ်ကြားတဲ့ တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီးရန်အောင်ကို ပေါ်တင်ကြီးပြောလိုက်တဲ့ ရွှေရူပါဦး
မကြာခင်မှာ ကလေးအဖေဖြစ်တော့မယ့်အကြောင်း ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ဝမ်းသာအားရစွာနဲ့ပြောပြလာတဲ့ ဘုန်းလျှံ